तपाईंको दिसामा संसार बचाउने शक्ति छ - सुनाखरी न्युज
Posted on: May 2, 2022 - 11:50 am
शरीरबाट निस्कने दिसा र पिसाबको कुरा आउँदा मानिसहरूले प्रायः आफ्नो नाक र आँखा खुम्चाउने गर्छन् । यसलाई फोहोरको रूपमा मात्र होइन यसलाई अस्वच्छ पनि मानिन्छ । तर, हाम्रो शरीरबाट निस्कने यो फोहोर असाध्यै काम लाग्ने छ ।
यो यति शक्तिशाली छ कि यसले मानिसको भविष्य बचाउन सक्छ । अचम्म लाग्यो ? आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔँ ।औसतमा, एक वयस्कले हरेक वर्ष ९१ केजी दिसा र ७३० लिटर पिसाब निकाल्छन् तर, यो के हुन्छ ? यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त ? यो आज मात्र नभई प्राचीन कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ । प्राचीन रोममा पनि मानव मल (दिसा–पिसाब) खेर फालिँदैनथ्यो । दिसालाई बगैंचामा मलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने पिसाबको प्रयोग कपडा निर्माणमा हुने गर्दथ्यो ।
इङ्गल्याण्डका राजा हेनरी आठौं (सन् १५०९ देखि १५४७) को समयमा ‘ग्रुम अफ द स्टूल’, देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पदमध्येको एक थियो । यस पदमा रहेका व्यक्तिले राजाको दैनिक कार्यमा सहयोग गर्थे । उनलाई राजाको निकै नजिकको व्यक्ति मानिन्थ्यो । गोंग किसानहरू (दिसाको भाँडो खाली गर्नेहरु) ले राती नै खाली गरेरस्थानीय किसानहरूलाई बेच्ने गर्थे । पिसाब संकलन गरी छालालाई नरम बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो ।
हामी के गर्ने सक्छौं ?
यसरी हामीले पनि हाम्रा पुर्खाहरूबाट मलमूत्रको उपयोगी विसर्जन बारे सिक्न सक्छौं । यसले हाम्रा धेरै वर्तमान समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ । पहिले हाम्रो ऊर्जा आवश्यकताको बारे कुरा गरौँ । पेटको राम्रोसँग सफाइका लागि फाइबरयुक्त खानेकुरा बढी खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसले कब्जियतको समस्या उत्पन्न गर्दैन । अर्थात्, यो एउटा यस्तो स्रोत हो जसको आपूर्ति सधैं कायम राख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको लागि पानी, हावा वा अन्य स्रोतहरूको निरन्तर आपूर्तिसँग तुलना गर्दा यो बढी भरपर्दो हुन्छ ।
ढल प्रशोधन गरेपछि बाँकी रहेको फोहोर मिथेन उत्पादनको लागि राम्रो कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधुनिक ट्रीटमेन्ट प्लान्टमा पनि यसमा ब्याक्टेरिया मिसाएर घरघरमा पाइपबाट वा सवारी साधनमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिने बायोग्यास बनाइन्छ । यो पेट्रोल वा डिजेल भन्दा धेरै सफा इन्धन हो ।यसरी हामीले ढलबाट पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छौँ । यसले विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको दबाब घटाउने छ भने वातावरणमा कार्बन उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याउनेछ ।
पिसाब कति उपयोगी छ ?
त्यसैगरी, पिसाब पनि मानिसको लागि लाभदायक हुन सक्छ । वास्तवमा, विश्वको ७२ प्रतिशत पानी कृषिमा प्रयोग गरिन्छ । आगामी दिनमा बढ्दो जनसङ्ख्या र जलवायु परिवर्तनले पानीको माग अझ बढ्नेछ । एक दशकमा कतिपय देशमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि पानीको कमीका कारण मानिसहरूले त्यो ठाउँ छोड्नेछन् । बेलायतमा हरेक वयस्कले दैनिक ९० लिटर पिसाब निकाल्छन् । यसबाहेक उनीहरुले घरमा प्रयोग हुने १४० लिटर पानी नालीमा बगाइदिन्छन् ।
के यो पानी पुन:प्रयोग गर्नाले पृथ्वीलाई खतरनाक खडेरीबाट बचाउन सकिन्छ ? यसको जवाफ हो, सकिन्छ । यसका लागि प्रविधि पनि उपलब्ध छन् र यो पहिलेदेखि नै प्रयोग भइरहेको छ । हाल इजराइलले प्रयोग भइसकेको ९० प्रतिशत पानीलाई रिसाइकल गरेर कृषिका लागि वाषिर्क ५६ हजार ओलम्पिक स्विमिङ पुल जति पानी बनाउने गर्छ ।
कृषिको कुरा गर्दा, कुनै पनि जीवित वस्तु बाँच्नको लागि फस्फोरसमा निर्भर हुन्छ । तर, अत्यधिक उत्खननका कारण यो द्रुत गतिमा घट्दै गएको छ र यसको पुनःपूर्ति हुन सक्दैन । अमेरिका, चीन र भारतले आफ्नो आगामी पुस्तामा यसको कमीको सामना गर्न सक्छन् ।
कृषिमा फस्फोरस नहुँदा मानिसले आजको तुलनामा आधा मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ । यस अवस्थामा हामी हाम्रा पुर्खाहरूको नक्कल गरेर माटोमा फोहोरको प्रयोग गर्न सक्छौं । जस्तै कि कम्पोष्ट शौचालय वा बायो ग्यास उत्पादनबाट बचेको पोषक तत्व युक्त सुख्खा अवशेषहरू प्रयोग गरेर ।
शौचालयको पुनर्निर्माणले सफा दिसाको पहुँच नभएका ४ अर्ब २० करोड मानिसहरूलाई ठूलो फरक पार्न सक्छ । पानी बिना चल्ने शौचालयले हरेक दिन पाँच वर्ष मुनिका झण्डै ८०० बालबालिकालाई मृत्युबाट बचाउन सक्छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सह–संस्थापक बिल गेट्सले शौचालयको बढ्दो बजारले जीवन बचाउने मात्र नभई व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि फाइदाजनक रहेको बताएका थिए ।
सन् २०३० सम्ममा शौचालयको बजार ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । हरेक डलरमा पाँच डलरको कमाई हुनेछ । त्यसैले तपाईंको दिसा हासो वा समस्याको कारण होइन । यदि हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्यौँ भने यसले पृथ्वीलाई जोगाउन सक्छ । बीबीसी